5 Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro
Fungidzira akagara pasi kunakidzwa kwako mangwanani kofi yakaitwa zvetsika Italian mavakirwo apo akatarira mvura ikapenya rwedenga uye luscious mitema makomo. Nepo izvi zvingava unorira chete kurota, zviri zvechokwadi kune avo kuti ashanyire kunoshamisa Lake Chemhondoro. ichi dzinokatyamadza rwendo anogara pachigaro chishuvo mazita vafambi vazhinji. Kwakatoisa akaita nzira kwayo padenga sirivha chidzitiro pamwe Hollywood Hits uye mabhaisikopu vatorwa! Lake Como riri kuchamhembe kukona Italy, kurudyi pedyo Swiss Alps. Pakati pemahombekombe eizvi Anoshamisa echisikigo kushamisika maguta akawanda ane chokwadi chekushamisika. zvisinei, KUSHANDA nevapi kushanya kungava nyore kana iwe uri munhu zvakasimba nepurogiramu. Kana iwe uri pfupi iri nguva uye vanoda kuti zvikuru kubva yenyu rwendo, pano vari 5 wakajeka maguta kushanya musi Lake Chemhondoro.
1. Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro: sezvo
Netaundi Chemhondoro zvichida kupfuura ashanyira ose maguta munharaunda nokuda chiteshi chechitima. Ndiyo kutanga pfungwa vashanyi vakawanda sezvo chitima tasva ndiyo yakanakisisa uye nyore nzira kusvika Chemhondoro. Nepo vamwe vanoona pfupi vanorega kwavo rwendo kushanyira uye kuona vamwe Chemhondoro, vamwe kuzviona sechinhu chinokosha chiitiko. Chikonzero vakavhengana manzwiro imhaka muguta mukurumbira. Zviri pakati pamaguta makuru ari pedyo, uye haana zvizere vakambundirana wayo touristic chikumbiro. Vamwe vanhu vanoda ichi uye tora nguva soka vose zvisakamboonekwa uye wokukwezva vashanyi guta rino rakanaka. zvisinei, vamwe vanoda kusvika kumaguta madiki kuwana zvavanenge funga isina kumbobatwa uye zvechokwadi maguta Italian.
Nepo vamwe vashanyi funga Chemhondoro tourist musungo, avanotarisira akuregerere pakutanga kunaka ichi muguta rekare. Unogona kupedza imwe vhiki rose kuongorora Como uye vachiri kuwana zvinhu kuti pakutya. Saizvozvo, zvakawanda vashanyi kuti kuwa murudo muguta kutora nguva kufamba guta. Pangava yakawanda cafes uye mumaresitorendi zvainanga mutsika vashanyi. zvisinei, panewo matombo anokosha akavanzwa. Locations dzakadai Silk Museum, ari 15remakore fung Church, ari porta Pretoria uye Ages pakati vanomirira zvikuru zvarisingazivi mweya.
Florence kuna Chemhondoro Zvitima
Milan kuna Chemhondoro Zvitima
Turin kuna Chemhondoro Zvitima
KuGenoa sei Zvitima
Bellagio anongova chikepe rwendo kubva Chemhondoro. Zviri inozivikanwa zvayo nzvimbo uye runako. It anogara pamusoro ari mativi munda rinotsemuka gungwa, vakaita mapoka maviri maviri. Guta riri pamusoro mawere chikomo uye inopa munhu anoshamisa maonero avo vanofamba kukwira cobbled migwagwa uye ichitenderera alleys. Vazhinji veko uye vashanyi vanodana Bellagio korona rine Lake Chemhondoro. Saizvozvo, zvakanzi zvokusarudzwa somumwe zvikuru maguta yakaisvonaka Europe. Hazvina mubvunzo inonyanya kufarirwa uye vakawanda akashanya munharaunda. Kamwe wasvikapo, uchanzwisisa sei. Kana ukashanyira Bellagio, nechokwadi kuunza kamera nemi. Kana pane nzvimbo kuti achakupa mufananidzo wakakwana, zviri zvachose Bellagio.
Bergamo sei Zvitima
Verona kuna Chemhondoro Zvitima
3. Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro: Varenna
Riri kumabvazuva kweLake Como nhema Varenna. Nepo kuti chisingaenderani kukura kumaguta makuru, zvichiri kunofanira kushanya nzvimbo. musha uyu wakajeka zvetsika Italian hove ndiye anofanira kuona kuti munhu wose anoda kutiza Chipatapata chiri guru upenyu guta. Time sokuti kukanomira sezvo imi pazvigaro nechiteshi chengarava uye vanofarira kutambudzika panguva yebhuruu mvura uye dzinodzengerera makomo. Kamwe iwe tora zvose, famba kuwana cobbled Lanes, wakajeka machechi, uye zvinoshamisa dzimba pamusoro Varenna. Ivai nechokwadi kuti chiratidzo Villa Monastero dzako dzinoyevedza kuona. Hazvina nguva dzose kuzarura kuruzhinji, asi kana uri rombo, iwe uchaona echinyakare eitaly maface uye mukati meimba. Tora kufamba kuburikidza refu uye dzakaonda nemapindu azere zvekumwe kasvisto paunenge tarisa nyanza.
Milan kuna Varenna Zvitima
Florence kuna Varenna Zvitima
KuTurin kuna Varenna Zvitima
KuGenoa kuna Varenna Zvitima
On kumadokero pemahombekombe Lake Chemhondoro, unogona kushanyira yakanaka taundi Menaggio. Menaggio Yakakura rimwe taundi kunokwezva vakawanda nokuda kwayo dzinokatyamadza maonero yakanaka akitekicha. The musanganiswa dzedunhu runako blends pamwe chinyakare Italian guta. Taundi rine zvakawanda zvivako kuti musi kudzokera remakore rechi19. The Piazza Garibaldi ndiye chaizvoizvo musimboti gungano nzvimbo veko zvose uye vashanyi. Kune plethora ose cafes uye maresitorendi kuti anopenya nomufaro uye upenyu. Menaggio zvakare kunofanira kushanya nokuti vanoda nhoroondo. Dhorobha akaita basa rinokosha muna First uye Second World Wars. Mazuvano, pane zvakawanda Tours kuti anogona kutora iwe kuti chinokosha akarikomberedza zvinotyisa munharaunda.
Pavia sei Zvitima
Brescia sei Zvitima
Bologna sei Zvitima
Modena kuna Chemhondoro Zvitima
5. Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro: Tremezzo
Kana uchida kuona Lake Como pamwe ose muumbozha esthetics ane chikuru hotera, ipapo shanyira Tremezzo. Tremezzo iguta kuti anenge vakagamuchira kukurumbira kwegungwa uye asarudza kusika rakasiyana uye dzakaisvonaka ruzivo vashanyi. Pasinei arasika zvayo kubva zvikuru chinyakare Kutarira uye anzwe, Tremezzo achiri zvinoshamisa guta kushanya. Zviri pedyo zvikuru kuna Bellagio uye kumisa vakawanda vanoda kuona nzvimbo yakanyarara kuti achine zvimwe ruzha kwairi. Kunyange zvazvo mumahotera uye dzimba muguta kutyaira yakawanda Vashanyi, guta achine zvimwe zvinoshamisa zvinotyisa. The Church of St. Maria, semuyenzaniso, yakakurumbira nokuda kwayo incredible chidhori Madonna Nera. Kunze kuti, pane akanaka mapindu kuti kufamba kuburikidza uye kunakidzwa nokuona uye manzwi Lake Chemhondoro.
Tortona sei Zvitima
Mantua sei Zvitima
NePiacenza kuna Chemhondoro Zvitima
Livorno kuna Chemhondoro Zvitima
Idzi dzinongova 5 wakajeka maguta kushanya musi Lake Chemhondoro. zvisinei, mudziva rine zvakawanda pfupiro pane hunoshamisa girl nemisha yakanaka. Visit Lake Como uye kunakidzwa mafaro mvura mabasa, zvinoshamisa kuvira kwezuva, uye zvinofadza hikes. Book A Train uye kuongorora Lake Como uye akapoteredza zvishamiso hune.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Wakajeka Towns To Visit On Lake Chemhondoro” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/picturesque-towns-lake-como/ – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#LakeComo comolake europetravel eurotrip chiitalia chitima mazano Train Travel travelitaly